Vaovao - Lovia servieta voajanahary
lakozia & fisakafoana
Sakafo Cheese & Antsy Set
Lovia servieta voajanahary voajanahary
Slate plates Table sets dia manana tombony roa miavaka raha oharina amin'ny seta mahazatra:
Voalohany, tena matanjaka amin'ny scratches izy ireo ary faharoa, mora ny manafaka azy ireo amin'ny toerana rehetra.
Ny takelaka slate dia tsy vitan'ny hoe mahavariana amin'ny endrika mahafinaritra sy manintona, fa amin'ny alàlan'ny fahasamihafan'izy ireo. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny fametrahana latabatra ho an'ny fametrahana latabatra, toy ny lovia fanasan-damba ho an'ny lovia mendri-piderana, toy ny takelaka na ho toy ny voninkazo sy ny maro hafa.
Na toy ny haingon-trano haingon-trano ahafahanao mampiseho ny toerana tsara tarehy ianao na manafatra sakafo mivantana, miaraka amin'ny takelaka misy takelaka dia afaka mampiaiky ny rehetra ianao.
Avy amin'ny fomba fijery ara-tontolo iainana ihany koa, ny takelaka slate dia safidy tena tsara, ny slate dia vato voajanahary izay tsy voatery mamokatra toy ny fitaovana hafa.
Ireo toetra rehetra ireo dia mahatonga ny fametahana slate tsy vitan'ny hoe tena mpijery fotsiny, fa afaka mahazo isa amin'ny tohan-kevitra ara-tontolo iainana sy azo ampiharina.
Ny takela-kazo tsara tarehy vita amin'ny tanana vita amin'ny slate voajanahary dia mampiseho ny sisiny tsy manam-paharoa, manome fototra tany ho an'ny fromazy, charcuterie na sakafo hohanina. Soraty mivantana eo amin'ny takelaka fromazy misy tsaoka mba hametahana ireo safidy nasongadina; fafao fotsiny amin'ny lamba lena. Miaro latabatra.
Birao manompo Slate Style Rustic- 100% vita tanana avy amin'ny vato voajanahary voajanahary, tarehy voajanahary tsara tarehy dia hahatonga ny latabatra fisakafoanana ho miavaka. Fomba tsara hanomanana fromazy, tsindrin-tsakafo ary appetizers. Tonga lafatra amin'ny fialamboly, fanompoana, haingon-trano ary maro hafa.
Vita amin'ny Slate voajanahary avo lenta. Ny takela-bato tsirairay dia miavaka amin'ny sisiny misy potipotika. Nofonosina menaka mineraly mba hamoahana ny hatsaran-tarehy voajanahary!
Noho ny akora vita amin'ny slate voajanahary dia marefo izy io ary mety hanosihosy ny endriny ny zavatra maranitra (antsy, forks, sns.). TSY MISY microwave, fanasana vilia, lafaoro ary fatana azo antoka. Sasana amin'ny tànana ihany.
Fotoana fandefasana: Jul-05-2021
Industrial Park, Lushan City, Jiujiang, Jiangxi, Sina